Siphazamisa zonke iintlobo zomgangatho wokomelela womthambo kunye nokusetyenziswa kwezemidlalo.
I-EVA Foam Mat: I-Tatami Mat, i-Judo Mat, i-Karate Mat, i-Kickboxing Mat, i-wrestling mat, i-Tumbling mats, i-jiu jitsu mat, i-tatami mattress, i-MMA mats, i-bjj mat, umgangatho weTatami, i-inflatable gymnastics mat, i-Martial arts mats, i-Puzzle yokuzivocavoca umzimba, Imethi yokunyusa ubunzima, Umatshini wokubambana wasekhaya, Umgangatho womgangatho kaTatami.
Iimveliso zethu eziphambili zonke iintlobo nokwadala nokomelela, uthotho EVA ziquka EVA Exervise mat, Tatami Mat, mat judo, ukhuko teakwondo, ukhuseleko mat, mma kunye jjd mat nazo zonke iintlobo EVA Puzzle mat ezinxityelelanisiweyo, ubungakanani 1mx1m, 60cmx60cm kunye 100-50mm ubukhulu. Yintoni enokusetyenziswa ngokubanzi kwiGym, Ekhaya nakwezinye iindawo zemidlalo.
I-ISO, i-SGS, Fikelela, iNgxelo yoVavanyo loMlilo, uVavanyo lwe-CNAS… njl.Uvavanyo olwahlukileyo luyasiqinisekisa ukuba sibonelela ngeyona mveliso ikhuselekileyo neyona ikhuselekileyo kubathengi bethu ngalo lonke ixesha.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, eyethu ifektri isivumela ukuba senze ngokwezifiso nawuphi na umbala kunye naziphi na iipateni ozifunayo!
Kwaye akukho MOQ yazo naziphi na iimveliso! Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo okanye ixabiso.
Okanye ndwendwela iwebhusayithi yethu ngemveliso enomdla ngakumbi.
UYAQHUBEKA UKWAMKELEKA UKUHAMBELA IFETRIKI YETHU NALIPHI IXESHA NCEDA!
Izinto ezintsha ze-EVA, izinto ezixineneyo, amagwebu afanayo, ukuthungwa okuthambileyo, ukungena komoya okuhle, ukomelela okuhle, akukho mingxunya, akukho mingxunya, kunye nokubambelela okuqinileyo emhlabeni
Luthambe High ngaphandle deformation, bhetyebhetye elungileyo, uyilo banxibe-enganyangekiyo, ukwandisa ngempumelelo ukukhuhlana, anti-skid kunye anti-ukuwa, kwaye ngokufanelekileyo ukukhusela amadolo kunye namalungu kumonakalo
Ukuncitshiswa kwesandi kunye nokuncitshiswa kwengxolo akubaphazamisi abantu, kwaye amaqamza ashinyeneyo enza i-buffer ukuze ifunxe ngokufanelekileyo ingxolo, ukuze umntwana adlale ngolonwabo ngaphandle kokuchaphazela ukuphumla nobomi babamelwane
Kuya kukhethwa iindidi zezinto ezibhetyebhetye, kwaye uyilo olungqindilili lunokuthintela ukubanda nokufuma emhlabeni, lahlule umhlaba obandayo, kwaye luyeke usana lukhase lungoyiki ingqele
Umphezulu womatshini unoyilo olungena manzi, akukho manzi manzi, amabala obisi, kunye neziselo ezinokuntywila. Inokucocwa ngokucoceka nge-rag okanye ngamanzi, elula kwaye elula
Dibanisa ngendlela othanda ngayo, usike simahla, usike ngokuguqukayo, unganqunyulwa ngokuthanda, ecaleni kwebhedi, ecaleni kwetafile, kwikona yodonga, kwikona yesofa kunokugqunywa, ikhuselekile ngokwenyani kwaye iqinisekisiwe ngaphandle kweekona ezifileyo
Ipateni emile yedayimani ayityibilikisi kwaye ayinxibanga, ilungele iintlobo ezahlukeneyo zemigangatho engatyibilikiyo, efumaneka kuwo onke amaxesha onyaka, yomelele kwaye yomelele, ekumgangatho ophezulu, engaphukanga, ibona ukuthungwa, ukungatyibiliki okusebenzayo kunye nokungasebenzi -ukutshintsha
Uyilo lwebhegi yokuhombisa, olulula ukuqaqa nangaliphi na ixesha, imiphetho yezixhobo zicocekile, zikhuselekile ngaphandle kokusika izandla, ukusongela kuqinile kwaye kuyomelele, indawo yokusongela ayishiyi ubumdaka, iikona zezixhobo zijikelezwe kwaye azinakuba macala onke, ukhusela usana ukuba lungasikwa
Imibala eqaqambileyo etyebileyo ivuselela umdla wosana ekurhubuluzeni nasekudlaleni, kwaye ikhuthaza ukukhula komntwana
Izinto ezixineneyo zixinene neenyembezi kwaye ziyabhetyebhetye, ngenxa yoko akukho mfuneko yokuba nexhala malunga nokugwinya komntwana
Egqithileyo Ukuqina kweempuphu zokugoba amagwebu abafundi kwigumbi lokulala kwigumbi lokulala i-tatami foam mat
Umbala wePuzzle yePuzzle
I-Puzzle yamaKhuthi Mat
Zilolonge Mat Puzzle
Abaqalayo beGamma mat abangatyibilikiyo ukuba yindoda ...
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho wePuzzle, Zonke iiMveliso